Ochicho anya icho anya maka Feng Shui - otua esi eme ka icho anya nke oma?
Ntughari anya nke uche - iwu nke ichikota, na-emetụta irè
Ọ dịwo anya a gosipụtara na echiche anyị niile bụ ihe onwunwe na mgbe ọchịchọ siri ike na-enyere aka ịghọta nrọ ahụ. Ma naanị ịchọrọ - ntakịrị, ịkwesịrị imekwu mgbalị ndị mmetụta uche na nke uche. A na-enye enyemaka dị ukwuu n'ime osisi a iji hụ na ọchịchọ ya, na ike ya site n'aka onye ọ bụla.
Igbe ngosi anya - gini ka ọ bụ?
N'elu obosara obosara nwere ihe osise mara mma na nke mara nma nke ihe ichoro icho. Foto dị otú ahụ dị mfe ibudata, ihe bụ isi bụ na ha na-ewetara gị ọṅụ ma nwee ezi obi . Iji tinye osisi a, ị ga-ahụ ya kwa ụbọchị. Uzo a nke ichota uche di nma nke oma, ihe di mkpa bu itinye ya n 'uz o ziri ezi. Iji na-eme oge ọ dị gị mkpa nanị n'ọnọdụ dị mma, n'ihi na ụlọ ahụ na-eme ka ume niile dị, ya mere ike a kwesịrị ịbụ ihe dị mma.
Echiche nke uche na nkà mmụta uche
Ọtụtụ ndị ọrịa na-ebu ụzọ chee ma igosipụta ọrụ ọchịchọ, ọnọdụ dị otú ahụ ozugbo na-emetụta nsogbu. N'ihe gbasara akurita uche, uzo ihe ngosi a bu otu n'ime ewu ewu. Ndị dọkịta kwenyere na ọrụ dị otú ahụ na-arụ ọrụ nke ebe ziri ezi, na-ahụ maka ihe oyiyi, ma na-eme ka ụbụrụ rụọ ọrụ. Ọ dị anyị mkpa ịchọ ọ bụghị naanị uche, kama mmetụta niile, nke ọ bụla n'ime ahụ - mgbe ahụ ịchọta echiche na ọchịchọ ga-arụ ọrụ zuru oke. Ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ na-ejikarị ụzọ ntụgharị uche na-arụ ọrụ na kpakpando egwuregwu, ụmụ akwụkwọ, ụmụ akwụkwọ.
Iwu maka ịchọta ọdịdị anya
A na - atụ aro na ị ga - agbaso iwu ụfọdụ:
Mee ka ọchịchọ gee gị ntị, were ya na ọ meelarị n'ezie, na ị na-anụ ụtọ ihe nrọ gị. Ị na-achọ uwe ọhụrụ, na-anọ n'ụgbọala nke ụgbọ ala dị oké ọnụ ahịa, na-ezu ike n'àgwàetiti ndị dịpụrụ adịpụ.
I kwesiri ibu oru, ma ghara ihu onwe gi n'èzí, nmikpu kwesiri ka o zuo oke.
Ghọta ihe ọ bụla: ịnụ, ntụcha, uto. Na-eche ihe mkpuchi nke uwe ahụ n'ubu, ísì nke akpụkpọ ahụ n'ime ime ụgbọ ala, na-ekpuchi olulu nke oké osimiri nke ifufe na-ebute n'ụsọ osimiri.
Debe ihe kacha mma site na fim gị banyere ọchịchọ, ọ ga-alọghachite gị nrọ gị ma nyere gị aka itinye uche gị. Ndị ọkà mmụta sayensị na-akpọ ya "arịlịka-etiti".
Hapụ ọchịchọ. Echegbula onwe gị ma ọchịchọ ahụ ga-emezu ma ọ bụ na ọ bụghị, naanị nyochaa nke ọchịchọ na-eduga ná ihe ịga nke ọma.
Atụmatụ ile anya ịchọrọ anya nke ọma - esi eme ya?
Iji mepụta kaadi kaadị anyị kwesịrị ịmara iwu nke ya, ihe doro anya na nke ọma banyere ihe anyị chọrọ, ka anyị wee nwee ike iji anya nke uche hụ ihe ndị a chọrọ ma malite iwu nke ịchụpụta echiche nke ọma. Nanị esere ese foto agaghị enyere aka - ọ dị mkpa ka ha debe ha na mpaghara ma nọgide na-arụ ọrụ na osisi ahụ, dịka akọwara na iwu ndị dị n'elu.
Ntughari uche nke uche
Map ndị na-ahụ anya bụ nsonye nke ahụ gị na-arụ ọrụ na mmezu ọchịchọ, n'ihi ya, ha aghaghị ịdị na-egbuke egbuke ma dị mma. Kedu ka ị ga-esi mee ka ịme ihe ngosi?
Isi ihe bụ ịhọrọ ihe oyiyi na-egosi nrọ gị n'ụzọ ziri ezi.
Ihe kachasị mfe bụ map nke ụkpụrụ. Ịchọrọ ịchọta onyinyo nke ihe ị rọrọ banyere ya, ma kpoo ya n'etiti etiti, na-esote foto gị.
Ihe kachasị mfe bụ kaadi kaadị ụwa. N'etiti etiti mpempe akwụkwọ tinye foto gị, na gburugburu - foto ndị na-egosi mmezu nke nrọ gị. Na nke ọ bụla. Nke a ga - enyere aka ịmepụta ihe nkiri gị banyere imezu ọchịchọ.
Oghere ngosi anya - mpaghara
Atụmatụ maka ikesa mpaghara bụ otu. N'elu foto gị, ịchọrọ itinye ihe oyiyi nke nrọ.
Ugwu bụ n'elu akwụkwọ, ọrụ.
Kama nke ahụ - mpaghara nke ebube, ọ ga-ekwe omume ịse na ihe oyiyi ihe anyị ga-achọ inweta.
N'aka ekpe nke foto gị bụ mpaghara nke creativity, ị nwekwara ike itinye foto nke ọdịnihu chọrọ na nrọ banyere ụmụaka.
N'aka nri nke foto gị bụ ebe maka ezinụlọ.
N'etiti oghere nke ọrụ na ihe okike ị ga-eziga foto nke njem na-atọ ụtọ.
Na-esote, site na ntụgharị site na mpaghara ọrụ nyere foto maka akụkụ nke ime mmụọ , ego na mmekọrịta onwe onye. Ịkwesịrị ịtọ ha n'èzí n'efu n'etiti ugbua enwere mpaghara. Ogwe maka ihuenyo bụ ngwá ọrụ dị ike na mgba maka ọchịchọ mmadụ, ya mere, ọ dị mkpa ịbịaru nso ya.
Foto maka ihe ngosi nke ọchịchọ
E nwere ụzọ atọ ịmepụta ihe oyiyi: kọmputa, ezigbo na jikọtara.
Kọmputa . Mepụta blanket eji faịlụ kọmputa. Naanị ị ga-enweta ya. Ọtụtụ na-etinye bọmbụ anya na ekwentị mkpanaaka.
Ezigbo ụzọ . Na magazin ejiji na-achọta foto na foto ndị dị mkpa, bipụta na mado na mpempe akwụkwọ ahụ.
Usoro ngwakọta na-achọta ịchọta ihe oyiyi maka nyocha ihuenyo na Intanet, bipụta ha ma kpoo ha na osisi ahụ.
Onyonyo anya maka ubu ibu
Mmetụta nke ọchịchọ na-arụ ọrụ na nrọ nke ịla n'iyi - ee, ma naanị ọrụ na osisi ga-abụ obere. Dị ka ọchịchọ ọ bụla ọzọ, bọmbụ ihuenyo ga-enyere aka ma ọ bụrụ na ị ṅa ntị na ọnụ ọgụgụ ahụ. Ịhụ ọhụụ n'ụzọ doro anya na nke a na-adabere ọ bụghị nanị n'okwu ziri ezi, kamakwa na foto ziri ezi.
Ị nwere ike were ihe ndabere gị foto, ebe ọnụ ọgụgụ ahụ mara mma ma dị mkpụmkpụ, mana ọ dị irè iji Photoshop, yana usoro a ọ dị mfe iji mee ka ọnụ ọgụgụ ahụ dị mma.
A ghaghị itinye foto a n'etiti etiti ihe ngosi.
Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịhazi ihe oyiyi ndị ị hụrụ onwe gị na nrọ.
Na-agbaso iwu nke ịchọta anya, were onwe gị dị ka obere, na-agbasi mbọ ike, gbalịa inwe mmetụta nke mgbanwe nke ahụ gị.
Psychology nke egwu
Ọrịa uche - mgbaàmà
Ònye bụ onye na-edozi ahụ?
Iwu nke iche echiche
Olee otu esi egbochi nsogbu?
Olee otú ị ga-esi mee ka obi dajụọ gị ma ghara ịma jijiji?
Ịzụlite na ịzụlite àgwà
Kedu ihe ị ga-eme ka ụra buru ụra?
Di na-aṅụ biya kwa ụbọchị - ihe ị ga-eme?
Kedu ka esi agbaghara mmehie?
Cerebraral edema na ụmụ amụrụ ọhụrụ
Kedu otu esi eme ka inwe mmekorita nwoke na nwanyi di nma
Ntuchi nke nwa - afọ 2
Kedu ka esi zụlite nwa nwoke?
Elu elu elu maka okooko osisi
Onye na-eme ihe nkiri Halle Berry nwere obi ụtọ na ndị debanyere aha ya nke nwatakịrị dị afọ 3
Ofe na meatballs - uzommeputa
Isi isi ọwụwa - akpata
Chickenpox na ụmụ ruo n'afọ
Ntutu ntutu mgbe amuchara nwa
Seabuckthorn na ime
Na-ejupụta: Àkwà Ista
Peat achịcha na obi cheese
Ihe mgbochi na-ebipụta foto
Kedu otu esi eri mango?